ဗီနိုင်းဖြတ်စက် အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ အွန်လိုင်းမှာယူမှု.
ပင်မ > ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် တွဲဖက်ပစ္စည်းများ >ဗီနိုင်းဖြတ်စက် အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ
ဗီနိုင်းဖြတ်စက် အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ 47 ရလာဒ်များ
Page 1 of 47 Results 1 2	နောက်ထပ် နောက်ဆုံး
ลูกกลิ้งดึงกระดาษ สำหรับเครื่องตัดไวนิล Redsail RS-360C / RS-450C / RS-500C / RS-720C / RS-800C / RS-1120C / RS-1360C ---Vinyl Cutter compatibility
BUK30,918 - 34,353/pc
ลูกกลิ้งดึงกระดาษ ซิลิกาเจล สำหรับเครื่องตัดไวนิล Redsail----Silica Gel Pinch Roller Wheel for Redsail Vinyl Cutter
BUK18,126 - 19,919/pc
เมนบอร์ด (Motherboard / Mainboard ) สำหรับเครื่องตัดไวนิล Redsail รุ่น L6129 V1.2C ---Motherboard/Mainboard for Redsail Vinyl Cutter, L6129 V1.2C
BUK98,919 - 108,702/pc
Carriage สำหรับเครื่องตัดไวนิล ,สติเกอร์ without Contour Cut Function ( Redsail ) ---Carriage for Redsail Vinyl Plotting Cutterwithout Contour Cut Function
BUK70,522 - 77,497/pc
มอเธอร์บอร์ด / เมนบอร์ด สำหรับเครื่องตัดไวนิล ,สติกเกอร์ ( Redsail ) L6129 V1.2D ---Motherboard/Mainboard for Redsail Vinyl Cutter, L6129 V1.2D
แถบสายรองตัด ( ขนาดความยาว 10 เมตร , ความกว้าง 8 ม.ม.) สำหรับเครื่องตัดไวนิล (Redsail) ---Cutting Guard Strip Protection Replacemen​t for Redsail Vinyl Cutter
BUK49,369 - 54,252/roll
BUK20,463 - 22,737/pc
BUK123,153 - 135,333/pc
BUK12,011 - 13,345/pc
BUK113,603 - 126,225/pc
BUK36,119 - 40,132/pc
BUK21,265 - 23,628/pc
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-RS-PRA01
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-RS-PRW
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-RS-MBC
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-RS-CA01
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-RS-MBD
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-RS-CGS01
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-GR-PRW
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-MIM-PRW
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-LY-CA02
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-LY-CA01
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-LY-PRA02
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-LY-PRA01
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-LY-PRW
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-PCUT-CA01
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-PCUT-PRA01
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-PCUT-PRW
အမျိုးအစားကုဒ် : CS-RS-OT04
အမျိုးအစားကုဒ် : SIT-CS-KK-013
အမျိုးအစားကုဒ် : SIT-CS-KK-012
အမျိုးအစားကုဒ် : SIT-CS-KK-011
အမျိုးအစားကုဒ် : SIT-CS-KK-010
အမျိုးအစားကုဒ် : SIT-CS-KK-009
အမျိုးအစားကုဒ် : SIT-CS-KK-008
အမျိုးအစားကုဒ် : SIT-CS-KK-007
ဗီနိုင်းဖြတ်စက် အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ လက္ကားဈေးနှုန်း၌ဈေးချထားပါသည်။ ဈေးပေါပေါဖြင့်ဝယ်ယူလိုက်ပါ ဗီနိုင်းဖြတ်စက် အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ မှ ဗီနိုင်းဖြတ်စက် အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ ဖြန့်ဝေသူ,အကောင်းဆုံး ဗီနိုင်းဖြတ်စက် အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ ရောင်းရန်, ကျွန်ုပ်တို့သည် ---- ဖြစ်သည် ဗီနိုင်းဖြတ်စက် အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သည်,ဗီနိုင်းဖြတ်စက် အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ ဖြန့်ဝေသည်.